SOMALI THINK TANK » Falsafadda Kaneecada
You are here: Home / Culture, Featured Articles, Politics / Falsafadda Kaneecada
Posted by STT on May 30, 2015 | Leave a Comment
Quruxda nolosha waxay ku jirtaa u kuurgalida iyo barashada qaababka kala duwan ee nafleyda kale ee dunida ku nool u dabaraan noloshooda gaarka ah Sidoo kale foolxumada nolosha waxay muuqataa marka laga waji dadbado ama la iska indho-tiro qaabka nolosha dabiiciga ah ku socoto dabadeedna la isku maaweeliyo sheeko baraley aan bar iyo raad midna ku lahayn hanaan socodka dhabta ah ee nolosha. Haddaba qoraalkan kooban wuxuu ku saabsanyahay falsafadda Kaneecada ay ku maareyso nolosheeda gaarka ah. Ogaanshaha falsafadda Kaneecada waxay dan guud ugu jirtaa dadka oo Kaneecada la wadaaga orodka iyo harjadka aan dhamaadka lahayn ee nolosha loogu jiro. Sidoo kale, barashada falsafadda Kaneecada waxay si gaar ah uga faa’idi kara dadka Soomaaliyeed oo waqtigan la joogo danbe si dirqi ah ugu nool geeska Afrika iyo dacallada aduunka .
Aqoonyahanka noolebaaraha ahi “biologists” waxay ogaadeen xaqiiqo yaab leh oo ku saabsan qaab- taranka guud ee Kaneecada. Waxay cilmi baaris ku ogaadeen in Kaneecada ku baraarugsantahay run aysan ka dhuuman karin si kasta oo ay u cibaadaysato ama u calaacasho. Runtan waa mid ku aadan xiriirka ka dhaxeeya Kaneecada iyo deegaanka dabiiciga ah “ Environment.” Kaneecadu waxay garatay in dhasha iyo ubadka kaneecada lagu xukumay dhimasho deg deg ah mar ala marka ay ku dhex dhashaan deegaanka dabiici ah. Nasiib darro, markay qarxaan ukumaha Kaneecada, waxa isla goobtii ku qurbaxa oo ku saqiira caruurtii Kaneecada ee mudada dhow ama dheer laga war dhowrayay. Arintan waxay horseeday in faylasuufyada Kaneecada hal-abuuraan falsafad lagu badbaadin karo sinjiga Kaneeca iyo dhasheeda ay u heeshiiyeen maqaadiirta iyo odaygii malakulmowt ahaa.
Falsafadda Kaneecada waxay ku baaqaysaa in Kaneeco walba kun ukumood ku dhex daadiso deegaanka dabiiciga ah. Sirta ka danbeysa go’aankan fasafadeysan ma ahan mid la iska malawaalay, ee waa falsafad muddo badan laga baaraan dagay ka dib markii kaneecada ku baraarugtay in kunkii ukumood oo kaneeco ah mid ka mid ah si dirqi ah ku badbaadi doono, halka sagaal boqol, sagaashan iyo sagaalka ukumood oo kale ay ku dhex saqiiri doonaan deegaanka dabiiciga ah. Waa go’aan murugo iyo shaqo badan laga mudan doono, balse waddo kale oo Kaneecada u bannaan ma jirin waa haddii ay doonayso in faraceeda waaro, waayo nolosha oo dhan waxay ka bilaabataa kuna dhamaataa go’aan uu rabbi gaaray oo ah waari-mayside war hakaa haro! Si aad qoraalka dhan u aqrisid Riix Halkan.